Home Wararka Madaxtooyada oo Albaabada Loo xiray: Wasiir Ducaale oo laga celiyey Albaabka Hore.
Madaxtooyada oo Albaabada Loo xiray: Wasiir Ducaale oo laga celiyey Albaabka Hore.
Warar deg deg ayaa sheegaya in Wasiirkii Amniga alabaabka Madaxtooyada loo diiday inu galo isagoo looga shaki qabo inuu xiriir hoose la leeyahay kooxda xildhibanada mooshinka keenay madaama uu yahay shakhsi ka soo jeeda dadka Xamar deggan. Wasiirka oo aad u xanaaqsan ayaa waxa la soo sheegayaa in laga dansaday dhammaan telefoonaddii. Arrintan waxay u eg tahay inay xaladda faraha ka bixi doonto Saacadaha soo socda mar haddii:
Guddoomiyaha Golaha Shacbiga lagu xannibay Villa Ugandha oo ku dhextaalla Madaxtooyada oo usan wax hawl ah qaban Karin, qofna la kulmi Karin.
Wasiirkii Aminiga dalka u sarreeyey loo diiday inuu soo galo Madaxtooyada isagoo laga shakiyey.
Mar haddii ciidanka qaar la amaray inay toogtaan Shacbi bannaan baxaya sida ay nagu soo gaarayaan wararka ka imanaya Baydhabo.
Dhinaca kale Waxaa hadda si toos uga socda Villa Hargeysa shir jaraa’id oo ay qabanayaan xidhibaanno ka cabsi qaba inuu dalku khater sii galo oo Madaxda sare ugu yeeaya inay Distuurka ay wax ku yihiin ilaaliyaan haddii kale ay ka dhalan karto in xaalku uu sharciga baxo kadibna aan la kala adkeyn.
Farmajo waxaa uu dalka ku wadaa khater ciddi ku daawan lahayd ama ciddii ka hor iman lahayd inta ay goori goor tahay.
Previous articleSomalia plunges into fresh political crisis as Farmajo faces impeachment motion
Next articleXildhibaanada mooshinka gudbiyay oo soo saaray qodobo muhiim ah (Akhriso)
Swan oo Villa Somalia ku eedeeyay musuqa Doorashada